Mijery ny mari-panondroana Indo miaraka amin’ilay mpaka sary Holandey, Ello · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2019 8:26 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Ελληνικά, 繁體中文, русский, Español, Deutsch, Nederlands, English
Niresadresaka tamin'i Ello tamin'ny alàlan'ny mailaka momba ity tetikasa ity sy ny fikarohana momba ny mari-panondroana maha-indo ny Global Voices.
AE: Manantena aho fa ity tetikasa ity dia hanentana momba ny fiaviantsika. Nisy olona iray nilaza tamiko fa ny fototry ny olombelona dia tahaka ny fakan'ny hazo – raha tsy misy azy dia hianjera ilay hazo. Eny, tokony hifantoka amin'ny fanorenana ny hoavintsika isika, saingy tsy afaka ny tsy hiraharaha ny lasa. Ny ankehitriny sy ny hoavintsika dia natsangana tamin'ny lasa. Tokony hamela ny hafa hahita isika hoe iza isika ary manana tantara mahaliana zaraina isika. Mandray ity tetikasa ity mankany amin'ny ambaratonga manaraka aho amin'ny fakana sary sy fanadihadiana Indos isan-karazany manerana izao tontolo izao. Nanomboka fanentanana fanangonam-bola aho tamin'ity Desambra ity ary hifarana hatramin'ny faran'ny taona. Amin'izao fotoana izao, dia efa nahangona 3 400 Euros mahery tamin'ny 10.000 Euros nandrasana izahay. Hamatsy ny boky sy ny fitsangatsanganana an-tsariko mba hihaonana amin'ireo olona izay ho aseho amin'ny boky izany.